Google Inosheedzera $ 1B Revenue Share Chirongwa newe!
Svondo, Zvita 30, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Haisi chokwadi, ingobatanidza chirauro. Metacafe, yekutsvaga uye yekumisikidza system yemavhidhiyo, yakangopfuura $ 1,000,000 mumari yakagovaniswa nevakagadzira zvemukati. Mike anoshuma kuti Revver yakarova zvakare iyo $ 1,000,000 mumari yakagovaniswa gore rino futi. Ndanga ndichitsoropodza kurwisa kweGoogle pane vanopa zvemukati vanokumbira kubhadharirwa kuiswa kwekubatanidza. Michael Graywolf ane zvakare… arikutora makuru mawebhusaiti kuita basa rekuchengetedza kune iyo Google Masimba-Izvo-Izvo. Google inoti izvozvo